Indlela ukupenda ocingweni lamapulangwe? Ukukhetha ukwakheka
Lapho senza ukuhlomisa ezweni lakho site, sihlose ukwenza kube ukusebenza kanye ezingokoqobo. Ngaphezu kwalokho, ukunakwa okuningi ikhokhelwa UKUQINA isakhiwo ngasinye. Ngokwesibonelo, abanikazi abaningi bezibuza ukuthi ukupenda izinkuni kocingo.
Njengoba ojwayelekile, isidingo staining kocingo khona ngenxa yezizathu ezimbili. Okokuqala, indlela ukufeza inkonzo yayo nehlala njalo. Okwesibili, ithuba elihle ukuhlobisa ndawo. Kunoma ikuphi, ngaphandle ukucutshungulwa efanele futhi ngesikhathi esifanele ocingweni lamapulangwe zizoqala ukuguquka ngenjongo yokubi ngokuya esibukekayo, + futhi ngaleso sikhathi kuyoba kuncike kwamazinyo. Noma yimuphi izakhiwo kwezulu umonakalo, ngakho-ke kufanele sifunde ngalezi zici, ngaphambi ukupenda izinkuni kocingo.
1. Isinyathelo sokuqala ukwenza ukubala le ndawo ngesineke, kanye nenani upende.
2. Kubalulekile ukulungiselela ebusweni: ukususa ukungcola, uthuli, asuse izinsalela upende langaphambilini, kuhle ukuba ugaye ke.
3. Zonke anemifantu nemifantu kufanele lemva ukuba staining kwaba iyunifomu.
Feza umsebenzi odingekayo isimo sezulu sisihle, upende omisiwe ngokushesha.
I kangcono ukupenda ocingweni lamapulangwe?
Lapho ekhetha upende, kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi ibhodi izoba nabo emhlabathini. Lokho ingxenye kocingo okuzokwenziwa ezaziwumbile, kubalulekile ukuba Ukwakheka inqubo ibitume ezisekelwe. Kulokhu, isakhiwo ngeke alwe nalabo amanzi, ngakho-ke, liyokuma eningi isikhathi eside. Uma ufuna sekugcineni, eliqinile, kubalulekile ukukhetha umdwebo double, ukuthi sakhiwa izingqimba ezimbili. Yini upende ukupenda ocingweni lamapulangwe kulesi simo?
Ukuze ungqimba wokuqala kufanele kukhethwe nge primer alkyd-acrylic Ukwakheka ekhethekile, kanti eyesibili - elula acrylic. staining okunjalo alkyd kusiza Ukungena izinhlayiya ku ezimbotsheni nezinkuni, ungqimba engenhla kuwuthinta kahle ukwakheka bakhulelisa. I kwaphumela enamathela ukumelana uyakwazi ukukhonza iminyaka engaphezu kwengu-15. Enye kuka lokhuni kocingo upende, - upende, lapho kuphela sisekelwe. Nokho, ngemva kweminyaka eminingana ungqimba ebusweni ngeke ikhasi off, okusho ukuthi waphinda kudingeka ukupenda ocingweni. Le nkinga kwenzeka ngenxa yokuthi okumsulwa acrylic upende kahle banamathela izinkuni. Ngezinye izikhathi kungase kudingeke ukuba ubuyekeze isakhiwo unogada elidala - kulokhu kuba impela okwanele nopende eshibhile.
Uma ungazi ukuthi kufanele ukupenda ocingweni lamapulangwe, sicela uqaphele sha ukwakhiwa elandelayo ukubhekana naso:
PF-115 ( "Tex", Russia): bome ngaphakathi ngosuku, kugcina ikhava iminyaka 2-3, kuwufanele ruble 160. Ilitha ngayinye;
Impra (Pinotex, Estonia): bome emahoreni amabili, uphakamisa iminyaka 6, kubiza ruble 350 ilitha;
Ultra (Tikkurila, Finland): uDries ngamahora amabili isesikhathini iminyaka 8, kuwufanele 430 ruble ilitha upende ngayinye;
Supermal (Sniezka, Poland): bome emahoreni angu-5, isesikhathini iminyaka 5, kubiza ruble 400 ilitha.
Njengoba ubona, izinketho umklamo kocingo miningi. Konke kuncike kanjani enamathela eliqinile le ofuna, kanye zezimali inhlalakahle yakho. Kodwa kufanele sikhumbule ukuthi kungcono overpay isikhathi, njalo ngemva kweminyaka emibili noma emithathu, wahlanganyela yokudweba kocingo.
Chemical kusho zokususa upende ensimbi
Indlela ukususa ukuvaleka egumbini lokugezela, ekhishini? Ukuyeka le ukuvaleka e echibini ekhaya. Ukuyeka le ukuvaleka amapayipi ekhaya
Atom Egoyan: A Biography nama-movie
Brand Guide - ... Idala ncwadi brand. Ukuthuthukisa ncwadi brand
Ngabe amaprotheni kuyingozi impilo yamadoda: Izibuyekezo
UDkt Bobyr umtholampilo: Uhlolojikelele, amasevisi, oxhumana nabo kanye nokubuyekeza
Uyini-CPC focus lwezobuchwepheshe zasenkulisa?
Ebanga Usizi, kodwa namanje biography ujabule Petra Leschenko
Izinto zishiye ekuthambekeni ngo-2014 nezingubo ezifanele ukuqeda.